[Ankapobeny ] 07 Febroary, 2015 17:42
Ny fiainana teny an-drova fahizany, ara-tsary sokitra.
Eny Avaradrova hono ity hay kanto ity (zay ilay milay ao amin'ny facebook fa tsy ela dia mahazo fanazavana raha vao mametra-panontaniana, hihihi). Eo amin'ny tambohon'ny SFF, izany hoe ampitan'ny SAFF, efa alohan'ny hahatongavana eny amin'ny Rovan'i Manjakamiadana mihitsy.
Toy ny tamin'ny andron'ny Ejypta fahagola dia itony sarisary (sy soratsoratra) itony no natao hampisehoana ny fiaimpiainana, ny zava-nisy sy nitranga tamin'ny toerana iray fony mbola tsy nisy ny soratra ampiasaintsika ankehitriny. Ka mazava ho azy raha eny amin'ny "tanàna ambony" eny no misy azy ity : mitantara ny fivoahana na fidiran'ny Mpanjaka eny Androva fahizany, ireo mpanara-dia azy sy ireo vahoakany. Tsy tamin'ny andro fahagola aloha no nanaovana azy raha izao fahitako azy izao e, saingy mahalaza tsara ny tiany ambara. Indrindra koa fa natao amin'ny tambohon-tsekoly.
Nipetraka teny tanàna ambony teny ihany izahay fa tsoriko fa tsy mbola tandriko io an. Eny e, manaiky aloha aho fa tsy dia niakatra nihoatra lavitra ny zaridain'Andohalo na izany aza e, satria teo amin'ny manodidina teo no nisy ny sekoly sy ny trano fonenana tamin'izany. Ny tena rahateo mbola kely dia tsy dia nisaina hanita-dàlana lavitra loatra.
Fa ny tena nanintona ahy amin'izy ity indrindra indrindra dia ilay lokony. Nosokirina tamin'ny tany mena (biriky tany mena) ve sa novolavolaina aloha vao napetaka eo e ? Hitsikaraka valin'izay indray aloha. Io ilay loko maha-Nosy Mena an'i Madagasikara. Efa aty ivelany aho vao mahatsikaritra ny hamenan'ny tany any ambanivolo any amintsika any rehefa mijery sary.